छक्का पन्जा र लुकामारीमा देखियो किन यति धेरै अन्तर ?::Radio Chhahari
माघ ५, काठमाडौं । एक दिनको अन्तरालमा सार्वजनिक भएका दुई चलचित्र बीच दर्शकको आकाश जमिन फरक देखिएको छ । १३ जनवरीमा युट्युब मार्फत सार्वजनिक चलचित्र लुकामारी र १२ जनवरीमा सार्वजनिक छक्का पन्जा बीच निकै ठूलो अन्तर देखिएको हो ।
समाचार तयार गर्दा अर्थात मंगलबार साँझसम्म चलचित्र लुकामारीको दर्शक ७ लाख क्रस गर्दा छक्का पन्जाले भने करिब ४१ लाख दर्शक पाएको छ । एक दिनको अन्तरालमा सार्वजनिक भएका चलचित्र बीच देखिएको दर्शकको यति धेरै अन्तार सम्भवत नेपालको लागि पहिलो हो ।
लुकामारी बुढासुब्बा डिजिटलले बाहिर ल्याएको हो भने छक्का पन्जालाई हाइलाइट्स नेपालले सार्वजनिक गरेको छ । ‘छक्का पन्जा’ दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा डेब्यु चलचित्र हो । भदौको २४ मा रिलिज भएको चलचित्रले स्वदेश मात्र १६ करोड बढीको ब्यवसाय गरेको निर्माण पक्षको दाबी रहँदै आएको छ । दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माले मिलेर बनाएको यो चलचित्रमा दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, शिवहरी पौडेल, केदार घिमिरे लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिकामा अभिनय रहेको छ ।
’लुकामारी’ ब्यवसाहिक असफल चलचित्र हो । श्रीराम दाहालको डेब्यु निर्देशन रहेको यो चलचित्र ग्लेज इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको हो । गत असारमा रिलिज भएको यस चलचित्रमा सौगात मल्ल, कर्मा, विक्रमसिंह थारु, सुरविना कार्की, रिस्ता बस्नेत, कृष्णभक्त महर्जन, जे.वि. डिसी, प्रवण भुषाल, कुशल विष्ट, बसन्त भट्ट, प्रकाश पौडेल लगायतको मुख्य भूमिका रहेको थियो ।